ကိုဗဈလူနာ ကုသပြောကျကငျး လို့ ဆေးရုံက ဆငျးကာမှ လကျမခံနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ ကြေးရှာ – Let Pan Daily
ကိုဗဈလူနာ ကုသပြောကျကငျးလို့ ဆေးရုံ ဆငျးကာမှ လကျမခံနိုငျဘူးဆိုတဲ့ ကြေးရှာတှရှေိနတော စိတျမကောငျးစရာပါ။ စိတျဒဏျရာတှေ ထပျပေးသလို ဖွဈနကွေပွီ။ ကုသ/ကူညီပေးနသေူတှကေို အားနာကွပါဦးဗြာ။
သူတို့က ပိုးတှလေို့ ကုသမှု ခံယူပွီးကွပွီလေ။ လကျမခံနိငျဘူးဆိုသူတှေ ကိုယျတိုငျရဲ့မိသားစုဝငျတှေ ဖွဈခဲ့ရငျရော အဲ့ဒိလို ပွောနိငျကွမလား? ကိုယျ့အနီးအနားမှာ ပိုးရှိရဲ့နဲ့ မသိတဲ့သူတှေ ရှိနနေိငျတာကို သတိပွုရမှာပါ။ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရသူတှအေနနေဲ့က ထငျသာမွငျသာရှိနပွေီးသား၊ သူတို့ဆီကနေ ထပျမံကူးစကျမှုမဖွဈနိငျတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခွအေနရေောကျပွီမို့ ကနျြးမာရေးဌါနအနနေဲ့လဲဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ကွတာလေ။
ဒီအခြိနျမှာ ဖေးမ ကူညီကွရမယျ့ အစား စိတျဒဏျရာတှေ ထပျပေးကွရငျ လူသားခငျြးစာနာမှုမရှိလို့လို့ပဲ မှတျခကျြပွုရမှာပဲ။ ပိုးတှတှေ့ခေ့ငျြးတောငျ စာနာစိတျနဲ့ ကူညီပေး ကုသပေးနကွေတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ပရဟိတသမားတှေ ကွောကျဖို့လဲ ထားကွပါဦး။ ခကျတယျ။ မကွောကျတော့ လဲ လမျးလယျခေါငျ ထှကျ က ။ ကွောကျတော့လဲ အရိပျတှတေ့ောငျ ထ ခုနျနကွေတော့ မမြှတဘူးဖွဈနပွေီပေါ့။
ရငျခုနျသံ ရှငျရေး ကူညီမှုအသငျး အုတျတှငျးမွို့
ကိုဗစ်လူနာ ကုသပျောက်ကင်းလို့ ဆေးရုံ ဆင်းကာမှ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ကျေးရွာတွေရှိနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ထပ်ပေးသလို ဖြစ်နေကြပြီ။ ကုသ/ကူညီပေးနေသူတွေကို အားနာကြပါဦးဗျာ။
သူတို့က ပိုးတွေ့လို့ ကုသမှု ခံယူပြီးကြပြီလေ။ လက်မခံနိင်ဘူးဆိုသူတွေ ကိုယ်တိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်ရော အဲ့ဒိလို ပြောနိင်ကြမလား? ကိုယ့်အနီးအနားမှာ ပိုးရှိရဲ့နဲ့ မသိတဲ့သူတွေ ရှိနေနိင်တာကို သတိပြုရမှာပါ။ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့က ထင်သာမြင်သာရှိနေပြီးသား၊ သူတို့ဆီကနေ ထပ်မံကူးစက်မှုမဖြစ်နိင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေရောက်ပြီမို့ ကျန်းမာရေးဌါနအနေနဲ့လဲဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ကြတာလေ။
ဒီအချိန်မှာ ဖေးမ ကူညီကြရမယ့် အစား စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ထပ်ပေးကြရင် လူသားချင်းစာနာမှုမရှိလို့လို့ပဲ မှတ်ချက်ပြုရမှာပဲ။ ပိုးတွေ့တွေ့ချင်းတောင် စာနာစိတ်နဲ့ ကူညီပေး ကုသပေးနေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ပရဟိတသမားတွေ ကြောက်ဖို့လဲ ထားကြပါဦး။ ခက်တယ်။ မကြောက်တော့ လဲ လမ်းလယ်ခေါင် ထွက် က ။ ကြောက်တော့လဲ အရိပ်တွေ့တောင် ထ ခုန်နေကြတော့ မမျှတဘူးဖြစ်နေပြီပေါ့။
ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေး ကူညီမှုအသင်း အုတ်တွင်းမြို့
သစ္စာမရှိ ဖောက်ပြန် ထားသောသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာ လျှင် ချက်ချင်းမိုး တွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေ ပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား
ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးကို ထိုးနှံ ခှငျ့နဲ့ ပကျသကျပွီး ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးပွော